Deni oo xaalad caafimaad u Cafiyay shan xukmane - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Deni oo xaalad caafimaad u Cafiyay shan xukmane
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa dikreeto uu soo saaray Cafis gaar ah ugu fidiyey shan xubnood oo dhowaan ay xukuntay maxkamadda derejada kowaad ee gobolka Bari.
Wareegtada ayaa lagu sheegay, in madaxweynuhu shantaasi xukmane Cafiyay, kadib markii uu xeeriyay xaaladooda caafimaad iyo da’dooda oo weyn, waxaana xusid mudan in laba kamid ah xukmanayaasha la sii daayay Isniintii todobaadkan, kadib markii ay xaalad caafimaad la soo deristay.
Shanta xukmane oo magacyadoodu kala yihiin; Muuse Cali Jaamac Ina Caasho Ciise 70 jir ah, Cabdullaahi Yuusuf Buuxe Ina Faadumo Shire 60jir ah, Cawad Ceel Maxamed 70 jir ah , Cabdicasiis Baydhabo Axmed Ina Shamis Siciid 47 jir ah iyo Maxamuud Aadan Rooble ina Mumino Maxamud 60 Jir ah, ayaa maxkamadda derejada kowaad xukuntay 5-tii bishaan January 2020.
Maxkamadda ayaa saddex bilood ah oo xabsiya iyo ganaax lacageed oo dhan $500 oo Dollar, waxay ku riday Siyaasi Muuse Cali Jaamac, Cabdullaahi Yuusuf Buuxe (Diraac) iyo Cawad Aadan Maxamed (Cawad Ceel), halka maxkamaddu ay laba sano oo xabsiya iyo ganaax lacageed oo $1,000 Dollar ku riday Cabdicasiis Bayadhabo iyo Maxamuud Aadan Rooble.
Shanta xukmane ayaa xabsiga la dhigay intii u dhexaysay 30-November iyo 2- December 2019, kadib markii ay xukuumadda ku dhaliileen Heshiisyada Maal-geshi ay kula jirto shirkdaha laga leeyahay waddanka Imaraatiga, balse maxkamadda ayaa sheegtay lagu helay kicin dadweyn iyo aflagaaddo ka dhana madaxda Puntland.
The post Deni oo xaalad caafimaad u Cafiyay shan xukmane appeared first on Puntland Post.